Inona ny statistikan'ny Internet farany ho an'ny taona 2018
Alarobia, Oktobra 24, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Na dia nivoatra tamin'ny taona 80 tany ho any aza, ny Internet dia tsy natao varotra an-tsokosoko tany Etazonia hatramin'ny taona 1995 raha najanona ny fameperana farany hahafahan'ny Internet mitondra fivezivezena ara-barotra. Sarotra ny hino fa efa niasa tamin'ny Internet aho hatramin'ny nanombohany ara-barotra, fa manana volo fotsy aho hanaporofoana an'io! Tena sambatra aho niasa tamin'ny orinasa tamin'izany fotoana izany izay nahita ny fahafaha-manao ary nanipy ahy teo alohany
Alahady, Novambra 19, 2017 Alahady, Novambra 19, 2017 Douglas Karr
ClickTale dia mpisava lalana amin'ny indostrian'ny analytics, manome angon-drakitra momba ny fitondran-tena sy sary an-tsary mazava izay manampy ireo matihanina amin'ny ecommerce sy analytics hamantatra sy hanatsara ny olana amin'ny tranokalany. Ny Editor Visual Visual vaovao an'ny ClickTale dia manome fivoarana hafa, miaraka amin'ny fomba tsy misy kaody fampidirana hetsika manerana ny tranokalanao. Tondroy fotsiny ny singa ny hetsikao ary farito ny hetsika… ClickTale no manao ny ambiny. Miaraka amin'ny Visual Editor, Clicktale dia iray amin'ireo orinasa voalohany manome vahaolana ao anatiny